Akụkọ ihe ngosi |
Igwe igwe na igwe
Onye na -ebi akwụkwọ Stencil
Onye na -ebi akwụkwọ na -akpaghị aka
Onye na -ebi akwụkwọ ntuziaka
Onye na -ebu ebu
Loader na onye na -ebudata ya
Ngwakọta ngwakọta igwe ihe
Igwe AOI na -anọghị n'ịntanetị
Onye na -eri nri elektrọnik
Onye na -enye pneumatic
Igwe Nchekwa PCB akpaka
Igwe nhicha nhicha nchara
Igwe ịgbado ọkụ nke Wave
Ọdụ Rework BGA
Nchọpụta ịgbado ọkụ BGA na Nsogbu ịgbado ọkụ
site na nchịkwa na 21-09-30
Ọ bụrụ na enweghị ike inyocha nsogbu ịgbado ọkụ mebere igwe X-ray, ị nwere ike iji ink uhie na ngalaba chọta nsogbu ahụ? Mana ọ bụrụ na ikpo ọkụ ma ọ bụ gbanye ọkụ ịgbado ọkụ, nhazi PCBA mgbe ule ahụ gachara wee gafee, ink uhie na ule iberibe ga -aba uru? Ọ bụrụ na onye ahịa rịọrọ ka ọ were nke ọma ...
Eletrọniki na Ngwa RADEL 2021
Onye nkesa NeoDen onye ọrụ RU- LionTech ga-aga Eletrọniki na Ngwa RADEL Show. Nọmba ntuziaka: F1.7 Ụbọchị: 21th-24th Septemba 2021 Obodo: Saint-Petersburg Nnọọ ịnata ahụmịhe mbụ n'ụlọ ntu ahụ. Ngosi ngosi Ebipụta sekit sekit: PCB nwere otu akụkụ PC ...
NeoDen na Ngosipụta ElectronTechExpo
Emechiri ihe ngosi Electrontech Expo nke ọma na Eprel 15. E gosipụtara Neoden IN6 reflow oven na Neoden K1830 SMT igwe na ihe ngosi, nke dọtara ọtụtụ ndị ahịa na ihe ngosi ahụ ma ahịa ahụ nabatara ya nke ọma. Ọnụ ọgụgụ ndị na -aga ngosi excee ...
Nabata izute NeoDen na Ngosipụta ElectronTechExpo 2021
Ihe ngosi ElectronTechExpo 2021 NeoDen onye ọrụ RU onye nkesa- LionTech ga-aga ihe ngosi ElectronTechExpo. N'oge ahụ, anyị ga -egosi: NeoDen K1830 igwe na -ebunye na igwe IN6 reflow oven Ihe ọ bụla nwere njiri mara ya iji gboo mkpa ndị ahịa dị iche iche na ụdị na P ...
Nabata izute anyị na Productronica China 2021
Nabata izute anyị na Productronica China 2021 NeoDen ga -aga ngosi "Productronica China 2021". Igwe SMT anyị nwere atụmatụ pụrụ iche iji gboo mkpa ndị ahịa dị iche iche na ụdị na nrụpụta PCBA. Nabata ka ị nweta ahụmịhe mbụ ...
Nabata izute anyị na Productronica China 2020
Nabata izute anyị na Productronica China 2020 NeoDen ga -aga ngosi “Productronica China 2020 .A. Ngwaọrụ SMT niile nwere atụmatụ pụrụ iche iji gboo mkpa ndị ahịa dị iche iche na ụdị na nrụpụta PCBA. Nabata ka ị nweta ahụmịhe mbụ na th ...
Nabata ka ileta NeoDen na Win Eurasia 2020
site na nchịkwa na 20-03-14
Dị ka onye ndu na desktọọpụ akpaka igwe PnP dị na China, NeoDen ga-egosipụta ihe atụ anyị na-ekpo ọkụ NeoDen4, nke nwere sistemụ ọhụụ, isi 4, ndị na-enye ọkụ eletriki akpaaka na ụzọ abụọ. A ga -ekesa akwụkwọ ozi gbasara ngwaahịa ọhụrụ ebe ahụ. A na -anabata gị nke ọma n'ụlọ ntu anyị maka ajị anụ ọ bụla ...
Nabata izute anyị na Expo Electronica
Onye na-ekesa RU onye ọrụ NeoDen- LionTech ga-aga ngosi ngosi mba ụwa nke 23 nke ngwa elektrọnik, modulu na sistemụ. N'oge ahụ, anyị ga -egosi: 1. NeoDen4 igwe na -eburu ebe 2. NeoDen Smart1 igwe na -eburu ya na igwe 3. NeoDen K1830 igwe na -eburu na igwe 4. IN6 reflow oven ọ bụla ...
No.18, Tianzihu Okporo ụzọ, Tianzihu Town, Anji County, Huzhou City, Province Zhejiang, China.